पूर्वीय नाट्यसिद्धान्त र सहनशीला सुशीला – मझेरी डट कम
संस्कृत नाट्यशास्त्रमा नाटकलाई रूपक मानिएको छ । रूपक दृश्यकाव्यअन्तर्गत पर्ने साहित्यिक विधा हो । पूर्वीय आचार्यहरूले रूपकलाई साहित्यमा नाट्यको वाचक मानेका छन् । कुनै न कुनै रूपको आरोप नाटकमा हुने हुँदा पूर्वीय आचार्यहरूले नाटकलाई रूपक भनेका हुन् । (पोखरेल, २०६२ ः ५४) रूपकका दशवटा भेदहरू नाटक, प्रकरण, अङ्क, भाण, व्यायोम, समवकार, बीथी, प्रहसन, डिम र ईहामृगमध्ये ‘नाटक’ पहिलो र मुख्य भेद हो । पूर्वीय मान्यताअनुसार नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित हुनुपर्छ । नाटकमा विलास, सम्पन्नता र ऐश्वर्यको प्रदर्शन हुन्छ र सहायकको समावेश गरिएको हुन्छ । नाटकको नायक प्रतापी राजा, राजषिर्, धीरोदात्त वा कुनै दिव्य पुरुष हुनुपर्छ । नाटकमा रसको पूर्णप्रतिष्ठा रहन्छ । वीर वा शृङ्गारमध्ये कुनै एक रस प्रमुख हुनुपर्छ भने नाटकको अन्त्य सुखान्त हुनुपर्छ ।
पूर्वीय आचार्यहरूले कथावस्तुलाई नाटकको शरीर र रसलाई नाटकको आत्मा मानेका छन् । प्रस्तुत नाटकको कथावस्तु सामाजिक धरातलअन्तर्गत अधिकांशतः अभिजात वर्गमा उभिएको छ । केही अंश सामान्य पात्रका जीवनसँग सम्बद्ध भए पनि मुख्य अंश कर्नेल साहेब, उनकी छोरी सुशीला र जुवाइँ साहेवसँग सम्बद्ध देखिन्छ । वि.सं. १९९१ मा सुरू भएर वि.सं. १९९६ मा अन्त भएको यो नाटकमा नाटककी मुख्य पात्र सुशीलाले आफ्नै बाबुको सम्पत्तिले बनेको घरमा बसेर त्यो घर पनि हाम्रै बुबाले किनिबक्सेको त हो नि (पृष्ठ २४), जुवाडे तथा अधम पतिको कुटाइ चुल्ठोमा समातेर पाउपोशले बेस्करी…..(पृष्ठ २) कैले जुत्ताको डाम, कैले नलीको, कैले कमरपेटीको त्यत्तिकै छ (पृष्ठ ३) सहनुपरेको छ । गाली गलौज अभागिनी, सत्यानाशिनी (पृष्ठ २१) बाट अपमानित हुनुपरेको छ । आफ्नो कुनै कसुर नभए पनि अहङ्कारी, विलासी, अत्याचारी, अविवेकी पतिद्वारा घरबाट निकालिनु परेको जा चण्डाल्नी । सडकको धुलो खा, खेतको पानी पी, मर जा । खाक थू ः तेरो मुखमा, तेरो बुद्धिमा (पृष्ठ ४०) छ । अनि कर्नेलकी पुत्री तथा ठकुरीकी कुलबधू भएर पनि एक अपरिचित बाहुनको घरको नोकर्नी भएर बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । सुशीला सुँक्क-सुँक्क रूँदै जुठा माझ्दै गर्छिन् (पृष्ठ ४६) । यसरी सुखसयलमा बाल्यकाल बिताएकी दूधले चुठाएर राखेकी मेरी मैया आँखामा राखे पनि नबिझाउने स्वभाव भएकी (पृष्ठ ३) सुशीलाले अनेकौँ दुःखकष्ट भोग्नु परेको छ । यी विभिन्न घटना शृङ्खलाहरूले दर्शक तथा पाठकवर्गलाई नाटकको कथावस्तु सँगसँगै रूवाएको छ, दुःखित तुल्याएको छ । नाटकमा प्रयुक्त यी विभिन्न घटना शृङ्खलाले करूण रसको चरम अवस्था छोएको छ वा अङ्ग रसको रूपमा करूण रस प्रवाहित भएको छ भने रौद्र इत्यादि रसले अङ्ग रसको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले आचार्य भरतको नाट्यसिद्धान्तझैँ प्रस्तुत नाटकमा प्रयुक्त कथावस्तु शरीर र यसमा प्रयुक्त करूण रस आत्माको काम गर्न सफल देखिन्छन् ।
नाटककार तिवारीद्वारा लेखिएको यो नाटक नायिका सुशीलाको नामबाट नामकरण गरिएको भए पनि नाटकको नायक जुवाइँ साहेब हो, किनभने उसले कथानकको फल प्राप्त गरेको छ । ऊ धीरोदात्त नायक होइन किनभने ऊ क्रोधी छ । उसको स्वभाव स्थिर किसिमको छैन । ऊ संवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिलासको शरबत जुनेलीको मुखमा हुत्याइदिन्छन्, गिलासचाहिँ झ्यालबाट फ्याँकिदिन्छन् (पृष्ठ १९) भन्नुले ऊ विनयशील, मृदुभाषी र क्षमाशील छैन, उसको स्वभाव गम्भीर छैन । उसमा धीरललित नायकमा हुनुपर्ने स्वभाव पनि छैन किनकि ऊ समस्या पर्दा अत्तालिन्छ । सेते म त्यो पापको प्रायश्चित गर्छु । सिरानमुनिको खुकुरीले सेरिएर मर्छु (पृष्ठ ५४) भन्नुले उसले जीवनमा सुख पाएको अनुभव गरेको देखिँदैन । न अलिअलि पनि विद्याको अध्ययन गरेँ, न कुनै सामाजिक, प्राकृतिक विषयको अनुभव गरेँ….
(पृष्ठ ५९) भन्नुले ऊ धीरप्रशान्त नायक पनि होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । उसको जीवनमा शान्ति र सन्तोष छैन । ऊ सत्वगुणी नभए तमोगुणी छ । त्यसैले ऊ धीरोद्धत्त नायक हो किनभने ऊ आफ्नो प्रशंसा आफैँ गर्छ । मलाई को देखिस् तैले ?…..नोट चाहिन्छ, नोट, कि गिनी, कि असर्फी । जुन खालमा हामी जुवा खेल्छौँ ।….(पृष्ठ २०) । ऊ अहङ्कारी छ भन्ने कुरा तेरो खप्पर टुक्राटुक्रा गर्ने मेरो पनि धारिलो खुकुरी छ । (पृष्ठ ११) भनेबाट पुष्टि हुन्छ । पूर्वीय नाट्यसिद्धान्तमा भद्र, राजपरिवार वा उच्च वर्गको, कुलीन व्यक्ति नाटकको नायक हुनुपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत नाटकको नायक ठकुरी वंशमा जन्मेको, नोकरचाकर आदिसमेत भएको अभिजात वर्गीय हुनु पनि पूर्वीय नाट्यसिद्धान्तको अनुसरण हो ।
यो नाटककी नायिका सुशीला कथावस्तुको सम्यक विकास गर्नुका साथै नाटकमा प्रभावोत्पादकता प्रदान गरेकी छ । आचार्य भरतमुनिले वर्गीकरण गरेका नायिकाहरूमध्ये ऊ स्वकीया नायिका हो । ऊ अत्यन्त सरल तथा विनयशील स्वभाव भएकी नारी हो भन्ने कुरा (नम्रता साथ)….. मलाई केही पनि थाहा छैन (पृष्ठ ११) भन्नुबाट थाहा हुन्छ । उसको लोग्ने अधम, स्त्रीको इज्जत गर्न नजान्ने, क्रोधी (जङ्गिएर) तैँले भनी नपठाएकी भए…..(पृष्ठ ऐ.), आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, जुवाडे भए पनि उसले कहिल्यै लोग्नेलाई अपशब्द बोलेकी छैन । मेरो हृदय-सम्राट हजुर नै होइबक्सिन्छ (पृष्ठ ऐ) भन्ने सुशीलाले उसको लोग्नेले उसँग भएको पैसा लिने तेरी मैयाँलाई सुनाइदे, पाँच मिनेटभित्र पाँच सयको नोट मेरो अगाडि आइपुगोस् (पृष्ठ २०) भन्दासमेत चुपचाप सहेकी छ । अनेक प्रकारका यातना दिने (मुखमा सिस्नु लाएर) तेरो हिस्सी परेको थुतुनो (पृष्ठ २१), अपशब्द बोल्ने अलच्छिन….. (पृष्ठ ऐ), सुशीलाको बाबुलाई गाली गर्ने जस्ता क्रियाकलाप दोहोर्‍याइरहँदा पनि ऊ समुद्रझैँ शान्त भएर बस्छे । ऊ जहिले पनि नम्र भाषामा कुरा गर्छे तर उसले अनेक प्रयास गर्दा पनि गृहस्थी जीवन भने राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेकी छैन । उसलाई आफ्नै लोग्नेले गलहत्याएर ‘जा चण्डाल्नी सडकको धुलो खा, खेतको पानी पी, मर, जा (पृष्ठ ४०)’ घरबाट निकाली दिएको छ । जीवनमा यस्तो अवस्था पार गरिसक्दा पनि ऊ आफ्नो पतिलाई मात्र प्रेमभाव राख्दछे भन्ने कुरा ‘मेरो त बाँचुञ्जेलसम्म हजुरउपर यस्तै प्रेम रहनेछ जस्तो स्वयम्बरको समयमा थियो । (पृष्ठ ११) भन्नुबाट ज्ञात हुन्छ । लोग्नेले घरबाट निकाली दिएपछि पनि उसले परपुरुषको कल्पनासमेत गरेकी छैन । ऊ लोग्नेलाई आधा अङ्ग सम्झन्छे र भन्छे कि मेरोआधा अङ्ग नै मसित छैन (पृष्ठ ४५) । यसका साथै ऊ आफ्नो कर्तव्यको पनि ख्याल गर्ने नायिका हो ।
संस्कृत नाट्यसिद्धान्त अनुसार नाटकमा रसको पूर्ण प्रतिष्ठा रहन्छ । त्यसैले तैत्तरीयोपनिषद्मा समेत उपनिषद्कारले “रसो वै सः” भनेर रसलाई परब्रहृमको रूप मानेका छन् । संस्कृत साहित्यको प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थ साहित्य दर्पणमा कविराज विश्वनाथले रस के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा-